Office 2016 တွင် OS X El Capitan တွင်ပြproblemsနာများကြုံတွေ့ရသည် ငါက Mac ပါ
Microsoft သည် Office 2016 bug များကို Mac ပေါ်တွင်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေသည်
Miguel အိန်ဂျယ် Juncos | | Apple, NOTICIAS, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ, အတော်ကြာ
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်နီးပါးက OS X El Capitan ကိုအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကယူဆောင်လာသည့်တိုးတက်မှုများအပြင် အချို့ "run-in" ရှိခဲ့ပါတယ် OS X Yosemite တွင်ယခင်ကမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် software နှင့်အတူဤဥပမာကို Microsoft Office ၏ suite Office 2016 တွင်တွေ့ရသည်။
ဒီအသုံးပြုသူများ Mac အတွက် Office 2016 ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုသောအခါ၎င်းတို့သည်ကြီးလေးသောအမှားအယွင်းများကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ Word, Excel, Outlook နှင့် PowerPoint နှစ်ခုလုံးသည်အေးခဲနေသောခံစားမှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ Office 2011 အသုံးပြုသူများသည် OS X El Capitan ရှိ Outlook နှင့်အခြားပြproblemနာအချို့ရှိသည်။ မတူညီသောစာပေများသည်သုံးစွဲသူများထံမှတိုင်ကြားချက်များရရှိသည် မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အထောက်အပံ့က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပွင့်လင်းချည်အပြင် ကွဲပြားခြားနားသောပြproblemsနာများအကြောင်းပြောနေတာ။
Microsoft သည်၎င်းပြသနာများကို၎င်း၏ software နှင့်သတိပြုမိသည် ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်ကြားချက်တုံ့ပြန်ခဲ့သည် အသုံးပြုသူများသည်။ Support Website တွင်ဖွင့်ထားသော Thread တွင် Microsoft Program Manager ဖြစ်သူ Faisal Jeelani ကထိုပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် Apple သည်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ဖြေရှင်းနိုင်မည့်အချိန်အတိအကျမရှိသေးဟုပြောကြားခဲ့သည်။
El Capitan တွင်အသုံးပြုသောသုံးစွဲသူများသည် Office 2016 အတွက် Mac အတွက်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဒီကိစ္စကို Apple နဲ့တက်ကြွစွာစူးစမ်းနေပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမတွေ့မချင်းလူများကိုမိုက်ခရိုဆော့ဖ် AutoUpdate အသုံးပြု၍ နောက်ဆုံးသတင်း 2016 Office အတွက် Mac update များကိုတပ်ဆင်ရန်အကြံပေးသည်။
အခြားသုံးစွဲသူများနှင့်ပြနာများမှာကျပန်းပျက်ကျခြင်းများမှသည် သူတို့ကမည်သည့်အစီအစဉ်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ကြသည်မဟုတ် ရုံး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအထူးသဖြင့် Outlook တွင်ပြmostနာများအများဆုံးရှိသောအက်ပလီကေးရှင်းသည်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင် Office 2011 အသုံးပြုသူများပင်လျှင်သူတို့၏ inboxes များကိုမသုံးနိုင်ပါ။
ယခုအချိန်တွင်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းမှာယခင် version ကို install လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ Office 2011 (Outlook ကို mail manager အဖြစ်အသုံးမပြုဘဲ) နှင့် Microsoft ၏ဤအခြေအနေကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေသောနောက်ဆုံး patch ကိုထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » Microsoft သည် Office 2016 bug များကို Mac ပေါ်တွင်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေသည်
ဟိုဆေး Agudo ဟုသူကပြောသည်
Outlook 2016 အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော် Airmail ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။ Excel နှင့်လက်ခံရန်လက်ခံနိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိသောကြောင့်ဆိုလျှင် ...
Jose Agudo သို့ပြန်သွားပါ
- မူလ application ဖြစ်သော Mail သည် VIP အဆက်အသွယ်များမှမက်ဆေ့ခ်ျများကိုမပြပါ။
- iPhone ကိုသင်ချိတ်ဆက်မိသောအခါဓါတ်ပုံများအလိုအလျောက်ပွင့်လာသည်။
- ပါဝါဖွင့်သည်နောက်ဆုံးပေါ် Yosemite ဗားရှင်းထက်နှေးသည်။
- Cleanmymac3သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ပြန်လည်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ပြန်လည်တပ်ဆင်ရပါမည်။
- အခြားသူများကအလုပ်လုပ်ကိုင်ပုံရသည်၊ သို့သော်စွမ်းဆောင်ရည်အမြောက်အများမရရှိနိုင်ပါ။
Office Split မျက်နှာပြင်နှင့် Office application တစ်ခုကိုကြည့်သောအခါပြIနာတက်သည်။
Autodesk Autocad ကဲ့သို့ပြProbleနာများ။
Ismael Palacios-Baeza ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိမိတ်ဆွေများကအကြံပြုထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ Mac ကို PC နှင့် PC သို့ကူးပြောင်းတော့မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါအလုပ်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သော MacBook နှင့်ထိုကဲ့သို့သောပြcausedနာများဖြစ်ပေါ်စေသည့် Captain ကို install လုပ်ရန်စိတ်ကူးမကောင်း ခဲ့၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကတိကဝတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ Office အတွက်ပြusedနာဖြစ်စေတဲ့ operating system ကို Apple ကစတင်တာကတာဝန်မဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒါကကမ္ဘာပေါ်မှာအသုံးအများဆုံး suite ပါ။ Apple ကဘာပြောသလဲ။ Volkswagen လိုပဲဆက်နေမှာလား။
Ismael Palacios Baeza သို့ပြန်ပြောပါ
Apple သည် El Capitan မှမူလ OSX 10 သို့ပြန်သွားရန်စနစ်တစ်ခုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသင့်သည်။ Guinea Pigs အဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့တဲ့သတိမရှိတဲ့သူတွေကိုလျော်ကြေးပေးဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းပဲလို့ငါထင်တယ်။ »
လီယို Echevarria ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ကပ္ပတိန်ကိုတပ်ဆင်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်၌ကြီးမားသောပြproblemsနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Word ကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ၎င်းကိုတစ်ချိန်လုံးအေးခဲစေပြီး၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ helpaaa¡¡¡¡¡
Leo Echevarria သို့ပြန်သွားပါ
အောက်ပါပြsolveနာကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့အခါ Office 2016 ကို download လုပ်ပါ။ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ OS X နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ပြောတဲ့ Window ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမှာပါလို့ပြောပြီးစာတစ်စောင်ကိုသုံးပြီးဖွင့်ဖို့နည်းလမ်းရှိလား။ Mac လည်ပတ်ရေးစနစ်လား။
ငါညီလာခံများအတွက်ပါဝါ poin ကိုသုံးပါ, ငါ Mac ရှိသည်, oofice 2016 နှင့်အတူကဆိုးဝါးပြိုကျ, ငါအယ်လ် Capitan updated ပါပြီနှင့်ငါအတူတူသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
Excel 2016 သည်အချို့သောဖိုင်များကိုမဖတ်ရပါ။ ၎င်းကိုဖတ်ပါကအမှားများပြုမိသည်။ ငါအွန်လိုင်းနည်းပညာအကူအညီနှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့သည်, ငါကဖိုင်နှင့်အခြားသူများကို 2016 ခုနှစ်မတိုင်မီကမှမည်သည့်ဗားရှင်းနှင့်အတူဖွင့်လှစ်နိုင်ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ငါ့ကိုကွဲပြားခြားနားသောအခြားနည်းလမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်, သူကပြproblemနာကိုဖိုင်နှင့်အတူဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ငါကဒီဖိုင်ကိုလူအများအသုံးပြုနေကြတယ်၊ ပြproblemsနာမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တွင်ဖိုင် ၅၀၀၀၀ ရှိသည်ဟုသူကအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။ ကောင်းပြီဒီအဖြေနဲ့ငါ Alto de las Condes de Santiago de Chile ရှိ maconline စတိုးကိုသွားခဲ့တယ်။ အခြားနည်းလမ်းများစွာနဲ့အချိန်ဖြုန်းပြီးနောက်နံပါတ်များနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်သူက Excel ပြisနာဖြစ်ပြီးသူဖွင့်လိုက်တဲ့ဖိုင်ကကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် ပြနာက Excel ဖြစ်ပေမယ့်ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး စတိုးဆိုင်မန်နေဂျာနှင့်စကားပြောပြီးသူက“ မင်းတို့ပို့လိုက်တဲ့ဖိုင်က Mac ကလာတာလား။ ငါသူငါ့ကိုမပြောခဲ့ဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ပြfromနာရှိနေတယ်၊ ​​Mac ကနေ Mac ကမဟုတ်ရင်အလုပ်မလုပ်ဘူးလား။ ဒီအဖြေကိုရရင်ငါတို့မှားတယ်လို့ထင်တယ် သူ့အတွက်ပြproblemနာတစ်ခုမှာသူ၌ Mac နှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ Excel 50.000 ရှိ၍၊ Excel 2016 ရှိသူဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၁၁ တွင်သူဖွင့်လျှင်၊ သူကကျွန်တော့်ကိုပြောပြတယ်၊ ငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ပိုက်ဆံလည်းပြန်မပေးနိုင်ဘူး။ ရုံးသွားပါ။ ဒီမှာငါမကြာသေးမီကအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ နီးပါးဝယ်သောကွန်ပျူတာနှင့်အတူရှိနေပြီး၎င်းကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါ။
ငါ MAC နှင့်ရုံးနှင့်အတူအလွန်စိတ်ပျက်မိပါတယ်နှင့်ထိုမှတပါး, ငါအသုံးပြုမှုမရှိအခြားရွေးချယ်စရာရှိသည်။
ငါ Mac စာအုပ်လိုလားသူ retina 13 "ရှိသည်။ လုံးဝစိတ်ပျက်မိတယ်, Mac 2016 Office နဲ့အတူတူပဲ။ ဒီပစ္စည်းအသစ်ရဲ့တန်ဖိုး ၂၅% နဲ့ငါ့ကွန်ပျူတာကိုပိုကောင်းတယ်။ ပံ့ပိုးပေးသူနှစ် ဦး စလုံးတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြစ်တင်ကြသည်၊ ကွန်ပျူတာပျက်သွားတယ်၊ Excel ကရူးနေတယ်၊ ​​အီးမေးလ်တခုကိုဖွင့်ရတာခေါင်းကိုက်တယ်၊ ဖိုင်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါနာမည်ကိုမထားဘူး၊
ဒီရုံး 2016 လိုပဲအက်ပဲလ်နဲ့မိုက်ခရိုဆော့ဖ်တစ်ခုခုကတစ်ခုခုလုပ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုဖို့ပေးရတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ပေးသင့်တာရှက်စရာကောင်းတယ်။ Officeeeeee မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး၊ Macbook Pro OS က CAPTAIN ကိုမွမ်းမံပြီးစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်တယ်။
အမှန်တရားကတော့ငါစိတ်ပျက်နေတုန်းပဲ။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ အမှန်တရားကလိုချင်တာအများကြီးရတယ်။ သုံးနှစ်ကြာ Office 2016 ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး Macbook ကိုသုံးတယ်။ နှေးနှေး၊ တခါတရံတွင်ကပ်နေသည်၊ တူညီသော macbook "sticks" နှင့်အမှန်တရားမှာ၎င်းကိုသင်ပင်အသုံးမပြုလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Pedro Antonio Manrique နေရာလွတ် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် OSX CAPITAN ကို install လုပ်ပြီးယခု Office POWER POINT နှင့် WORD သည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ OSX YOSEMITE ကိုပြန်သွားနိုင်သလား။
Pedro Antonio Manrique အားပြန်ပြောပါ
မဖြစ်နိုင်ဘူး! ဒီမှတ်စုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့မှာထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ သြဂုတ်လ ၂၀၁၆ ဖြစ်ပြီး၊ ပြproblemနာဆက်ရှိနေသေးသည် ... Excel ကကျွန်တော့်ကိုရူးသွပ်စေသည်။ အစအ ဦး တွင်ပြtemporaryနာသည်ယာယီသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်မိုက်မဲစွာလက်ခံလိုက်သောနောက်ဆုံးသတင်းများအရ၊ ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘဲအချိန်နှင့်အမျှဆော့ဖ်ဝဲကိုပြန်လည်စတင်သည်။ ရုံးလိုင်စင်ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဟာပင်လယ်ဓားပြရုံးတစ်ခုပါတဲ့ကွန်ပြူတာတစ်လုံး ၀ ယ်နိုင်ပြီးတတ်နိုင်သလောက်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာအလုပ်လုပ်မှာပါ။
၎င်းသည် mac os capitan ရှိသောရုံးခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
jaiver moreno အားပြန်ပြောပါ
ဒီစကားလုံးကအရမ်းဆိုးရွားတယ်။ စာရွက်စာတမ်းတွေကိုမူရင်းအဖြစ်ရော၊ အခြားဖိုင်နာမည်နဲ့လည်းမသိမ်းနိုင်ဘူး။
ဖာနန်ဒို Palma ကိုပြန်ပြောပါ
ဤသီးတောင့်သည်အလွန်တာဝန်မဲ့သောအက်ပဲလ်နှင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုခိုးကူးခွေမရှိသောသီးသန့်ရောင်းခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းနှင့်မည်မျှဝမ်းနည်းစရာကောင်းသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်ကြီးများကိုပျက်စီးစေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အလုပ်မလုပ်ဘဲဖိုင်များကိုပိတ်လိုက်သောကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသော Mac ကိုကြည့်ပါ။ အသင်း ၀ င်မှုဆိုင်ရာ update ကို ၀ ယ်ယူပြီးသားပါ။ ဤ pod က Mac နှင့်စကားလုံးနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကူညီသည်။
Word Excel သည်ပိုမိုဆိုးရွားရုံသာမကမပြည့်စုံသောဖိုင်များကိုဖွင့်နိုင်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဘယ်သူမှမဖြေဘူး ၂၀၁၁ ရုံးသို့ပြောင်းပါ။
Ismael Sánchezဟာနန်ဒက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
တည်းဖြတ်ရန်အတွက်စာသားရွေးချယ်ရာတွင် Word တွင်ကျွန်ုပ်သည်ပြောင်းပြန်ဗွီဒီယိုမရ။ ငါလုပ်နိုင်တာ ကျွန်ုပ်မှာ 27 ′iMac retina ရှိတယ်
ငါ ၂၀၁၂ ကနေအသုံးပြုခဲ့တဲ့ macbook ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ ရုံးနဲ့လည်းအလားတူပြhaveနာရှိတယ်။ ငါ Mac ကိုပြောင်းလိုက်ရင်ဒီပြtypesနာတွေရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်အဖြေတစ်ခုပေါ်လာရင်ငါ့ကိုအကြောင်းကြားပါ။
JF ဘရက်ဖာ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်တော့်မှာ Office 2011 နဲ့ MacOS Sierra ရှိတယ်။ AppStore ကအကြံပြုထားတဲ့အတိုင်း OS ကို update လုပ်ဖို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အထိကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ရုံးကပြwithနာတွေစတင်ခဲ့တယ်။ Outlook ကကျွန်တော်မသုံးသောတရုတ်စာလုံး ၃ လုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အမြဲတောင်းဆိုသည်။ Word သည်စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးမှုကိုပိတ်ထားသည်။ Excell ကတစ်ခါတစ်ရံပုံသေနည်းများကိုဆဲလ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကူးပြောင်း။ ယခင်တန်ဖိုးကိုသာလွှဲပြောင်းသည်။ ရှင်းနေသည်မှာ Mac OS နှင့် Microsoft Office တို့အကြား 3% လိုက်ဖက်မှုမရှိကြောင်းထင်ရှားသည်။ ငါ software ကို update လုပ်ဝံ့။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားတိတ်ဆိတ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်လား။ ကွန်ပြူတာများပေါ်တွင်လက်ဝါးကြီးအုပ်ရန်မလိုသည့်အတွက်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Mac အတွက်သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖန်တီးရန်တာဝန်ရှိသည်။ မပေးရင်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအားနည်းချက်တွေကြောင့် Mac ကိုစီးပွားဖြစ်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးညံ့ဖျင်းပြီးကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုလိုလိုလားလားရှိအောင်ဘယ်လိုပြမလဲ။ ဒါဟာရည်ရွယ်ချက်ကိုသက်သေပြရန်ခက်ခဲသည် ...
JF Bradfer သို့ပြန်သွားပါ
Gerardo Garcia ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာတွင်ရှိနေပြီးပြandနာများဆက်လက်ရှိနေသေးသည်ဟုမဖြစ်နိုင်ပါ! ငါရုံး 2017 စောင့်ဆိုင်းရန်လိုလိမ့်မည်နည်း ကောင်းသောအရာသည် Windows ရှိပြီး Linux ပင်ဖြစ်သည်။
ဖြေရှင်းနည်းများကိုဖြေဆိုသူတစ် ဦး၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၁ တွင်ရုံးခန်းဖွင့်ထားသော OS sierra တွင်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ စက်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်လသာဆောင်သေးသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ပြtheနာဖြစ်သည်။
Recontra စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော၊ Excel သည်ကျွန်ုပ်၏ Mac တွင်မဖွင့်ပါ။ မမျှော်လင့်သောအမှားတစ်ခုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတစ်နေ့လုံးအဖြေရှာခြင်းနှင့်ဘာမျှမရှာတော့ပါ။ ကူညီပါ!!!!
Apple TV အသစ်အတွက် Universal Search သည်အရေးပါလာသည်